घरमा आगो झोसेपछि खरानीको दु:ख हुँदैन Nepalpatra घरमा आगो झोसेपछि खरानीको दु:ख हुँदैन
जसरी गलत खानपिनले रोग बढाउँछ त्यसरी नै गलत संगतले संक्रमण पनि बढाउँछ । जसरी आफुलाई अब्बल, ज्ञानी र दार्शनिक सोच्ने घमण्डले शत्रुता बढाउँछ भने त्यसरी नै गलत संस्कृति र सोचले पनि मानिसलाई कुरुप बनाउँछ ।
आधुनिक र सभ्य बन्ने होडमा नाङ्गिने प्रवृत्ति अनि आफु महान राजनीतिज्ञ बन्न धर्म संस्कृति र परम्परा लिलाम गर्ने प्रवृत्ति पनि उहीँ घर पोलेर खरानीको दु:ख नभए जस्तै हो ।
फलानो मुर्दावाद फलानो जिन्दावाद, नारा लगायो जुलुस निकाल्यो । बिदेशी दर्शन र सिद्धान्त टेबुलमा पस्केर सडकमा टायर बाल्नु र देशलाई परनिर्भर बनाएर आमूल परिवर्तनको रटान लगाउनु बाहेक के चाहिँ भाको छ र ?
कुर्सी हत्याउन बिदेशीको शरण पर्नु पद पाउन विदेशी राजदूतावास धाउनु अनि पार्टी मिलाउन बिदेशी कै भर पर्नु । भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेर पनि होईन भन्न सक्नु लाज पचेको भनौं वा बहादुर ?
जाति, भाषा र सम्प्रदाय माथिको ठाडो हस्तक्षेप स्विकार्दै सिरियल, संगीत र नृत्य परायाको सिको गरेर हाम्रो परम्परा र हाम्रो संस्कृति भन्नू पनि उहीँ घर पोलेर खरानीको दु:ख नभए जस्तै हो ।
कृषिप्रधान देशमा कृषि क्रान्तिको बिगुल फुकेर मल किटनाशक औषधि र उपकरण समयमा भित्र्याउन नसक्नु । उत्पादित वस्तुको बजार मूल्य नदिनु बिचौलिया र कालाबजारिलाई बढावा दिनु । अनुदान सहयोग र प्रोत्साहन आफ्ना मातहतकालाई दिनु । कागजी कृषिप्रधान देश पनि उहीँ घर पोलेर खरानिको दु:ख नभए जस्तै हो ।
नेपाली युवायुवतीलाई खाडी लखेटेर श्रम-शक्तिको अभाव भन्दै भारतको उत्तरप्रदेश, बिहार र झारखण्डबाट कामदार झिकाउनु । स्वदेशी उत्पादनलाई खुम्च्याएर बिदेशी आयातलाई प्राथमिकता दिनु ।
कुटनीति, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति अरुलाई बेचेर स्वाभिमानिको हुंकार लगाउनु । गरीवको आँसु, भरियाको पीडा, भोकमरीको दर्दनाक तस्बिर, बलात्कारको चिख र पुकार देखाएर दातृ निकायबाट डलर झार्नु यो पनि उहीँ घर पोलेर खरानिको दु:ख नभए जस्तै हो ।
ईशारामा जुट्नु ईशारा मै फुट्नु, लड्ने लडाउने अरु नै मार्ने मर्ने हामी, भकारीमा आगो झोसेर छिमेकीको घरमा काट्टो खाए जस्तो । स्वरोजगारको वाचा एकातिर, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ढोंग अर्कातिर, झोले झाम्टे र आसेपासेलाई पोस्ने बाहेक कुनै सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् ।
यो वाद र त्यो वादको मञ्चन हुन्छ कर्णालीको भोकमरी र तराईको शीत लहर देखाएर अनुदान सहयोग भित्र्याईन्छ र आफुलाई अब्बल र सफल राजनेता कहलाईन्छ । हैकम र अप्रत्यक्ष शासन बिदेशीको गुलामी मानसिकताको पर्दा भित्रबाट खिस्स हाँस्दै, बजाउँछन चर्का माईक र ढोलहरु हामी समृद्धि र समाजवादी यात्रामा छौं ।
घर मै आगो झोसेपछि खरानीको के दु:ख ….